file ကိုမန်နေဂျာ Explorer ကို File - Explorez | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » file ကိုမန်နေဂျာဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို - Explorez
file ကိုမန်နေဂျာဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို - Explorez APK ကို
Explorez သင်သိုလှောင်ရေးကိရိယာ (ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပအမှတ်တရများနှစ်ဦးစလုံး) ရက်နေ့တွင်နေထိုင်သင့်ရဲ့ဖိုင်တွေ, စူးစမ်း browse နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုသည်ပေးသောအလင်းအလေးချိန်နှင့်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အားကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းသင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းအတွက်အလွန်အလင်းဤအရပ်အလွန်နိမ့်မှတ်ဉာဏ်ခြေရာနှင့်အတူဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာတစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုထက် ပို. file ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာစာဝှက်ထားတဲ့ဖိုင်မော်ကွန်းတိုက်ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသူခွင့်ပြုခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပြခန်းပုံရိပ်တွေ၏ခွဲဝေမှုလုပ်ဆောင်။ Explorez ဖြတ်ပြီးဖိုင်တွေမျှဝေဖို့တည်ဆဲ file ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူများနှင့်ပြခန်း applications များနှင့်အတူကြီးမြတ်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါရှိပါတယ်။file ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် User Interface
အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာစီမံခန့်ခွဲမှုပညတ်တော်ပြည့်စုံအစုံရှိပါတယ်။ ဒါဟာပွင့်လင်း, မိတ္တူ, အပြောင်းအရွေ့တို့ပါဝင်သည်, အမည်ပြောင်း, delete နဲ့ command များကိုဖျက်စီး။ အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာ Contextual Drop-down menus တွေကနေတဆင့်ထို command များကိုအဘို့ကြီးသောအသုံးပြုနိုင်စွမ်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ default အပလီကေးရှင်းဖိုင်တွေမဖွင့်ဘို့အတော်လေးအသုံးဖြစ်ပါသည်, တိကျတဲ့ဖိုင်အမျိုးအစားများကိုဖွင့်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ default အပလီကေးရှင်းကိုအောက်မေ့၏။ အသုံးပြုသူသက်ဆိုင်ရာ installed applications များ၏အစုအနေဖြင့်မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရေးလိုတဲ့အခါ contextual menu ရှိ command 'နှင့်အတူကိုဖွင့်ပြီး "နေရာလေးကိုအတွက်လာပါတယ်။
navigation: အဆိုပါအပြန်အလှန်လိပ်စာဘားသင် browse ချင် directory ကို directory ကိုလမ်းကြောင်းထဲမှာ paste သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင် input ကိုမှခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်ပညာရှင်အဆင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးထေူ၏။ မျိုးစုံသိုလှောင်ရေးကိရိယာမှတစ်ဆင့် navigation ဟာအံဆွဲမီနူးမှာပြထားတဲ့ဖြတ်လမ်းကနေတဆင့်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဤသည်လွယ်ကူသောကူးယူခွင့်ပြုနှင့်ဖိုင်ကို browser မှာဖိုင်တွေရဲ့ရွေ့လျား။
ပစ္စည်းဒီဇိုင်း: အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာနှစ်ဦးကို themes များ, အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ရှိပါတယ်။ အမှောင်ဆောင်ပုဒ်သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ file ကိုကိုင်တွယ်ဖျော်ဖြေနေစဉ်သင်၏မျက်စိနှင့်ဦးနှောက်အပေါ်သိမြင်ဝန်လျှော့ချအတွက်အသုံးဝင်သည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်း: ဖိုင်မန်နေဂျာအားဖြင့်ကွပ်မျက်ခံရခံရအားလုံးစစ်ဆင်ရေး (encrypt လုပ်ထားဇစ် archive ကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖိုင်များကိုကူးယူကဲ့သို့) အပြေးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းအလုပ်အကိုင်အသေးစိတ်တိုးတက်မှုကိုပြသပေးသောနောက်ခံဝန်ဆောင်မှုချခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။
file manager ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပနှစ်ဦးစလုံး device ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ထိုးထွင်းသိမြင်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သိမ်းပိုက်အာကာသကဲ့သို့ပင်လမ်းကြောင်းနှင့်ကိရိယာအမည်ကို mount ။ ဒါဟာကိရိယာ system ကိုဂုဏ်သတ္တိများဖွင့်လှစ် ejecting နှင့် mounting တူသောသိုလှောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ပေးရန်ဆက်စပ်ပေါ့ပ်အပ် menu ကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာလည်း devices တွေကို RAM ကိုပြသသည်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဒေတာ၏လုံခြုံရေးမှကြွလာသောအခါ Explorez ကသင့်ရဲ့ device ကိုသိုလှောင်မှုအပေါ်နေထိုင်သို့မဟုတ် (ကွန်ယက်ကိုကျော်) ဝါယာကြိုးမှစလှေတျတျောခံခြင်းရှိမရှိ, အချို့အစွမ်းထက် features တွေပေး။ ဖိုင်မန်နေဂျာ၏အလွန်ကနဦးဗားရှင်းအတွက် features တွေ၏အချို့။
တစ်ခုမှာ Password ကိုလျှို့ဝှက်ကုဒ်: ဖိုင်တွေကို encrypt နေဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်မှသင်၏ဖိုင်များကာကွယ်နည်း Explorez အပေါ်စကားဝှက်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နဲ့ encrypt လုပ်ထားဇစ်မော်ကွန်းတိုက်ဖန်တီးပါ။
လုံလုံခြုံခြုံမျှဝေခြင်း: စကားဝှက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် archive ကိုအတွက်သင်၏ဖိုင်များကိုဖွင့် bundle ပြီးတော့ဝေမျှသို့မဟုတ် AES-128 နည်းနည်းသုံးပြီး Google Drive သို့မဟုတ် Dropbox ကဲ့သို့သင်တို့အပေါ်မှာမိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုမှ upload ။ ဤသည်မိုဃ်းတိမ်ကိုသိုလှောင်မှုအတွက် shared သို့မဟုတ်တက်နေထိုင်လျက်ရှိသည့်အချက်အလက်များကို dual လုံခြုံရေးကထပ်ပြောသည်။
ဖျက်နေသည် Secure: အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာတစ်ခုလုံးကိုဖိုင်အကြောင်းအရာထုတ်ရှင်းလင်းဖို့သုည-Filler ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဖျက်ဆီး၏အလွန်အခြေခံဗားရှင်းနဲ့တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုအနိမ့်အဆင့်အထိလုံခြုံတဲ့ပယ်ဖျက်လုပ်ဆောင်တယ်။
Explorez ဇစ်မော်ကွန်းတိုက်ဖန်တီးခြင်းနှင့် extracting ထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာကိုလည်း password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဇစ်မော်ကွန်းတိုက်ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ AES-128 နည်းနည်းသုံးပြီး encrypt လုပ်ထားဇစ်မော်ကွန်းတိုက်ဖန်တီးမျှဝေနိုင်ပါသည်။ သငျသညျလုံခြုံရေပုံးထဲမှာသင့်ရဲ့ဒေတာကိုဖွင့် bundle နဲ့ cloud storage ကိုမှ upload တင်ချင်တယ်တဲ့အခါဒီအင်္ဂါရပ်နေရာလေးကိုဖြစ်ပါတယ်။
System Tools များနှင့်အသုံးပြုပုံများ
အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာသင့်ရဲ့ device များမှတ်ဉာဏ် (RAM ကို) ပေါ်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုပြသထားတယ်။ လက်ရှိတွင်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ App များကို run ဖို့သွားလာရန် RAM ကို icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤအမှတျဉာဏျအတှငျးရှိ hooking တက်ကြွစွာနဲ့မြုံ apps စာရင်းကိုပြသထားတယ်။ သင့်ရဲ့ device ကိုမှတ်ဉာဏ်လက်လွှတ်ရန်မလိုအပ်သော app များကိုသတ်ပစ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီစာရင်းကိုသုံးပါ။
အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာတပ်ဆင်ထားသိုလှောင်ရေးကိရိယာ၏ system ကိုဂုဏ်သတ္တိများကြည့်ဖို့ပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်။ ဤတွင်အချို့ကြိုတင်သိုလှောင်မှုစစ်ဆင်ရေးဖျော်ဖြေနိုင်ပါတယ်
+ ပြည်တွင်းရေး / ပြင်ပသိုလှောင်မှု Browse
+ မီဒီယာဖိုင်များ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ယေဘုယျဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
+ Create, upload နှင့် encrypt လုပ်ထားသည့်မော်ကွန်းတိုက်ဝေမျှ
app ကိုသော့ခတ်ဘို့လူပျို password ကို +, encryption ကိုနှင့်မော်ကွန်းတိုက်ကို
ပြခန်းကနေ + ဝှက်ဓာတ်ပုံများ
အလင်းနှင့်မှောင်မိုက် themes များနှင့်အတူ + ပစ္စည်းဒီဇိုင်း
မှတ်ဉာဏ်ဝန်၏ + လျင်မြန်စွာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
+ ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ရှုမြင်တက်ကြွစွာနဲ့မြုံ applications များ
+ သင့်ရဲ့အထိခိုက်မခံဖိုင်များကိုလုံခြုံတဲ့ပယ်ဖျက် Enable လုပ်ထားပါ။
+ Access ကိုဘက်ထရီအသုံးပြုမှုအကျဉ်းချုပ်
+ လွယ်ကူဖိုင်မန်နေဂျာ (ဘရောက်ဆာ) UI ကိုသုံးစွဲဖို့
file ကိုမန်နေဂျာဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို - Explorez